2013 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Antivirus Software ၁၀ မျိုး ~ လမင်းတရာ
2013 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Antivirus Software ၁၀ မျိုး
IN Antivirus - ON 10:43 PM No comments
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Computer , Network , Personal Information တွေကို နှောက်ယှက်ဖျက်စီးနေတဲ့ virus တွေက တနေ့ တနေ့ကို မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ Target တစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားကြသလို ၊ တချို့ကလဲ မိမိရဲ့ Skill ကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ အပြုသဘောမျိုး ရေးသားကြတယ် ။ တစ်ချို့ကလဲ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ကြပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ Internet World မှာ cyber crime တွေဖြစ်ကြ၊ Cyber War တွေ ဖြစ်ကြနဲ့ ကြားထဲက PC User တွေမှာ မြေဇာပင်သဘောမျိုး ဖြစ်ကြရတယ်။ အင်တာနက် သုံးရင်း အဖျက်အမှောက်၊ အနှောက်အယှက်တွေက မိမိတို့ရဲ့ computer ထဲကို မိမိ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာပဲ ၀င်ရောက်လာကြတယ်။ ပုန်းအောင်နေကြတယ်။ သတိမမူ ဂူမမြင် ဆိုသလိုပဲ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီး Information တွေ ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးကုန်တော့မှပဲ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ့ ဖြစ်ကုန်ကြရော။
ဒီ post ကို ရေးသားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက အဲဒါပါပဲ။ computer တစ်လုံးမှာ Antivirus Software ကောင်းကောင်း တစ်ခုတော့ ရှိနေသင့်ပါတယ်။ Virus ရေးသားသူတွေ ရှိနေကြသလို တနေ့ တနေ့ မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားနေတဲ့ Virus တွေကို စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ (ICSA Lab, NSS Lab … etc ) အဖွဲ့အစည်းတွေလဲ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ Personal Computer တစ်လုံးမှာ Antivirus Software ဆိုတာက မရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းထားသင့်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ 2013 ခုနှစ်အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစား နာမည်ကြီးနေတဲ့ Antivirus Software (၁၀) မျိုးကို ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေများအတွက် ကျွန်တော် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် Share ပေးလိုက်တဲ့ software တွေက Full Version တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Free Version တွေပါ။ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကတော့ မိမိတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ Licence Version ၀ယ်သုံးရင်သုံး ဒါမှ မဟုတ် ထုံးစံအတိုင်း အွန်လိုင်းက Crack Version လေးတွေ ရှာသုံးကြပေါ့နော် … :P ။ အဆင်ပြေရင်လဲ ကျွန်တော် ရှာပြီး တင်ပေးပါ့မယ်။ တခြားနည်းပညာ site တွေမှာလဲ တင်ထားပေးတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ connection အခက်အခဲကြောင့် http://download.cnet.com နဲ့ http://www.scanwith.com/ တို့ကနေ ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
(1) Bitdefender Antivirus 2013
You Can Download It In Free From Here
(2) Kaspersky Antivirus 2013
(3) Norton Antivirus 2013
(4) F-Secure Antivirus 2013
(5) BullGuard Antivirus 2013
(6) AVG Antivirus 2013
(7) VIPRE Antivirus 2013
(8) G DATA Antivirus 2013
(9) Webroot Antivirus 2013
(10) Avast! Pro Antivirus 7
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ .. လေးစားစွာဖြင့် ...မောင်လေ့လာ
မူရင်းလင့် / Tra myanmar
စာလုံးကလေးတွေကို ခုန်အောင်လုပ်ပြီး ညွှန်းကြည့်ရအောင...
ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူ အမျိုးအစား စာရင်း
Smart Driver Updater Version 3.3 Full
Pro Photoshop Lesson မြန်မာလို EBook
BurnAware Professional Version 6.1 Portable
Product Key Explorer v3.3.2.0 Portable (3MB )
Teamviewer 8.0.16642 Pro Full Version
Windows 8 Transformation Pack 7.0 (57.74 MB )
Boot Time မြန်အောင်လုပ်နည်း
Window XP Speed မြန်အောင်လုပ်နည်း
Pen Drive (သို့) Memory Stick ကို အတု၊အစစ် စစ်ဆေးန...
Windows 8 ရဲ့သိသင့်သော Shortcut များ
Bigasoft FLV Converter 3.7.30
Startup Faster! 3.6 (6MB)
Internet Download Manager 6.15 Build 5.1
Malwarebytes Anti-Malware PRO 1.75.0.1100 + Key
SpyHunter 4.11.10.4138 Full Version
Cracker လမ်းညွန် 2.2 ( Myanmar Ebooks )
Spyware Process Detector v3.23.2 + Patch
BSR Screen Recorder 5.0 full version
Corel AfterShot Pro 1.1.1.10 Full
ACDSee Photo Manager 15.2 Build 212 Full Version
Nikon Capture NX 2.4.1 Full Version
Facebook Account Hack နည်းနှင့် လုံခြုံအောင်ထားနည်...
FastStone Capture v7.4 For Pc
USB Safely Remove 5.2.1.1195 Full Version
ကွန်ပြူတာထဲက အမှိုက်တွေ ရှင်းပစ်ဖို့ Tracks Eraser ...
Photo Stamp Remover v5.1 Portable
Avira Internet Security 2013 13.0.0.3185 Full Vers...
Your Uninstaller! 7.5.2013.02 Full Version
Driver Genuis Professional
PC COMPUTER MANAGEMENT Ebook ( Myanmar Version )
Aone Ultra Video Splitter 6.4.0311 Full
Notepad မှာ Zawgyi Font နဲ့ မြန်မာစာရိုက်ပြီး Save...
ICare Data Recovery 5.0 လေးပါ။(for computer)
Idoo Video Editor Pro 1.4.0 For Pc 14MB
DLL-Files Fixer 2.9.72.2589 Portable
Torch Browser 23.0.0.2585 Final Latest Version ( 3...
FireFox Slowing Error Solution !
CleanMyPC 1.5.7 (x86/x64) with Crack Full Version
Bigasoft Total Video Converter 3.7.31.4806 (10MB)
Xilisoft Video Cutter v2.2.0 build 20120901 Full V...
မြန်မာဖောင့် ပြဿနာတက်သူများအတွက် Zawgyi Blog Day ပ...
Bigasoft Audio Converter 3.7.30.48 Full Version
USB Disk Security 6.2.0.125 Full Version
Registry Easey 5.6 Full Versionနဲ့ ထင်းခွေရင်း ရွှေ...
ဘလော့မှာ Scrolling Recent Posts သုံးချင်ရင်
SmartPCFixer 4.2 Full Version
WinRar ဖိုင်ကို password နဲ့ သုံးချင်ရင်
Madcrosoft PC TuneUp Tools 2013 For Pc
CD and USB Drives များ autoplay ပိတ်နည်း
Software မသုံးပဲ Folder ကိုလော့ချပြီး Delete လုပ်လ...
Windows Repair (All in One) v1.9.11
AVCWare Video Converter Ultimate 7.7.2 Full Versio...
Muti Virus Cleaner 2013 Portable
Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100 Full Version...
Folder Guard v8.4 + Keygen
GIVEAWAY VIDEO TO GIF CONVERTER
Revo Uninstaller Pro 3.0.1 Portable Free Download
Free Watch Online Movie Sites List
Firefox နှင့် Chrome တွင်မြန်မာဖောင့်မြင်ရန်, I E
Video Magic Pro 6.1.1.0 Full Version
ကွန်ပျူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်စေရန်နှင့် Virus မ၀င်အော...
၀င်းဒိုး(စ်) တင်နည်း XP
Driver Robot 2.5.4.2 rev 20440 Full.5.4.2 rev 2044...
Wise Care 365 Pro 2.23 Build 177 Final With Keygen...
iSkysoft DVD Creator 1.5.0.1 Full Version